तोैल घटाउने हो ? यस्तो चिया पिउनुस् !
काठमाडाैं | माघ ७, २०७८
तौल घटाउनका लागि मानिसहरू अनेक किसिमका डाइट लिन्छन् र जिममा गएर व्यायाम गर्छन् । तर कोरोनाका कारण जिमहरू बन्द भइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा घरैमा योगाभ्यास गर्ने अनि स्वस्थकर चिया पिउने गर्दा तौल नियन्त्रणमा रहन्छ । यहाँ हामी इम्युनिटी बढाउने र तौल घटाउने चियाको कुरा गर्दैछौं ।
दिनको एक वा दुई कप चिया पिउने गर्नुभयो भने शरीरको बोसो डढ्छ । यसले थकान र सुस्तता हटाएर दिनभरि फुर्तिलो पनि बनाउँछ ।
तौल घटाउन र स्वास्थ्य राम्रो बनाउन ग्रीन टी वरदान सरह हुन्छ । दिनको एक वा दुई कप ग्रीन टी पिउनुभएमा शरीरमा रक्तसञ्चार सुचारु हुन्छ । अनि कोलेस्ट्रोल लेभल घटेर मुटुको समस्या पनि हुन पाउँदैन । इम्युनिटी बूस्ट भएर रुघाखोकी र मौसमी रुघाखोकीको खतरा पनि घट्छ ।
कागती राखेको चिया तपाईंले अवश्यै पिउनुभएको होला । कागती तौल घटाउनका लागि अचुक औषधि हो । यसमा भएको भिटामिन सी र एन्टीअक्सिडेन्टले इम्युनिटी बूस्ट हुन्छ । अनि यसले शरीरमा जमेको अतिरिक्त बोसो पनि डढाइदिन्छ ।
यो चियाका बारेमा तपाईंलाई त्यति धेरै जानकारी नहोला । चीनमा पाइने यो चिया पिउँदा अतिरिक्त बोसो डढ्छ । हाई सुगर लेभल भएका मानिसलाई पनि यो चियाले फाइदा गर्छ । तौल घटाउन यो चिया प्रभावकारी छ ।
६ महिनामा आर्थिक क्रियाकलाप तीव्रः देउवा
धनगढी उपमहानगरका वृद्धवृद्धालाई निजी अस्पतालमा निःशुल्क ओपीडी सेवा दिने निर्णय
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकास्थित निजी अस्पतालले ७० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका र नेपाल निजी अस्पताल संघबीच मंगलवार भएको बैठकले नगरपालिकास्...
डोनबासबाट पछि हट्ने तयारीमा युक्रेन
चीन र अमेरिकाबीच विद्युतीय मुद्राको लडाइँ चर्किने संकेत
विमानको खोज तथा उद्धारमा सघाउन स्थानीयलाई सरकारको आग्रह